James Swan oo sharaxay "wadahadalo sarre" oo u socda DF iyo Somaliland
Swan oo sharaxay "wadahadalo sarre" oo u socda DF iyo Somaliland
WARIYAHA NEW YORK GAROWE ONLINE
Posted On 21-05-2020, 07:40PM
NEW YORK, US – Wadaxaajoodyo heer sarre ah ayaa u socda madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, sidda ay Khamiista maanta ah daaha ka rogtay Jamciyadda Qurumaha Ka Dhaxeysa.
Sidda laga soo xigtay diblumaasiga Ameerikaanka ah, UN-ka ayaa wuxuu dhiiragelinayaan wadahadaladdaas hoose ee socda.
"Marka aan u jaleeco xiriirka Soomaaliya-'Somaliland', waxaan dhiiragelinaynaa wadaxaajoodyadda heerka sarre ee socda, kaas oo labada dhinac ay isugu diyaarinayaan joogteynta xiriirka iyo baadigoobka wadahadalada mustaqbalka," ayuu yiri.
Hadalkaan ayaa dhinac marsan dhawaqyo maalmihii u dambeeyay kasoo yeerayay hogaanka Somaliland oo ku saabsanaa in aysan la hadli doonin dowladda federaalka ah hadii aysan aqoonsan qadiyadooda.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa 18-kii May ee sanadkan 2020 soo jeediyey maxkamad caalami ah oo ay "ku kala baxaan Soomaaliya iyo Somaliland". Tani waxay dhalisay waydiimo aan laga jawaabin.
Somaliland ayaa 1991-dii ku dhawaaqdey in ka go'dey Soomaaliya inteeda kale, balse ma helin aqoonsi caalami ah. Wadahadalada Muqdisho iyo Hargeysa waxay hakad ku jiraan ku dhowaad lixdii sano ee lasoo dhaafay.